Displaying 71-80 of 447 results.
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव मोर्चाद्वारा अस्वीकार, असहयोग र अवज्ञा आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं । मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गर्दै बिहीबारदेखि असहयोग र अवज्ञा गर्नेगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमांकनलाई आयोगमार्फत् टुंगो लगाउन प्रस्ताव राखेका थिए। तर, प्रस्त.. .. ..
विजय गच्छदारको जस्तो बलियो पुर्पुरो अरुको कहाँ ?
काठमाडौं । मधेसी नेताहरु मध्य सबैभन्दा बढी अवसरवादी चरित्रका नेता हुन विजय कुमार गच्छदार । उता सत्ता उतै -याल चुहाँउदै हिड्ने गच्छदार हालसम्म पटक पटक गरी १२ पटक मन्त्री बनिसकेका छन । उनको रोजाईमा मालदार मन्त्रालयको रुपमा चिनिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्.. .. ..
उपेन्द्र नेतृत्वको फोरमद्धारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, पत्र सभामुखलाई बुझायो
काठमाडौं, २ चैत । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छ । फोरमका सांसद शिवजी यादवले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई पत्र बुझाउँदै आफूहरले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे मोर्चाले भोलि ठोस निर्णय लिने
काठमाडौं, १ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नलिनेबारे भोलि बुधवार मात्रै औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ ।
आज सातदिने अलिटमेटमको म्याद सकेपछि मोर्चा आबद्ध सातै दलका शीर्ष नेताको सहभागितामा बुधवार बस्ने